October 2018 - Silo Sangalo
विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिला हेर्नुहोस त कति सम्म लामो छ त यिनको जिब्रो ?
October 31, 2018 Comments Off on विश्वकै लामो जिब्रो भएकी यी महिला हेर्नुहोस त कति सम्म लामो छ त यिनको जिब्रो ?
प्रेमीलाई खुसी पार्न प्रेमिकाले काटिन् आफ्नै नाइटो
October 31, 2018 Comments Off on प्रेमीलाई खुसी पार्न प्रेमिकाले काटिन् आफ्नै नाइटो
एजेन्सी । मेक्सिकोमा एकजना युवतीले प्रेमीलाई खुसी पार्न आफ्नो नाइटो काटेकी छन् । गुआडालाजारा क्षेत्रमा बस्ने २३ वर्षीया पालिना क्यासिलास लेन्डरोसले आफ्ना प्रेमीलाई खुसी पार्न ज्यान नै जोखिममा मोलेर नाइटो काटेकी हुन् । प्रेमीले नाइटोविहीन [ पुरा पढ्नुहोस ]
सबै शरीर ढोकेर बुर्का समेत लगाएर हिँड्नुपर्ने साउदी अरबमा मिनीस्कर्ट हंगामा भिडियो सहित
October 31, 2018 Comments Off on सबै शरीर ढोकेर बुर्का समेत लगाएर हिँड्नुपर्ने साउदी अरबमा मिनीस्कर्ट हंगामा भिडियो सहित
टाउकोमा झलल बत्ति बाल्ने कोब्रा सर्प कुकुरले भेटायो, यो चमत्कारी कोब्रा हेर्न मान्छेको ठुलो भिड
October 28, 2018 Comments Off on टाउकोमा झलल बत्ति बाल्ने कोब्रा सर्प कुकुरले भेटायो, यो चमत्कारी कोब्रा हेर्न मान्छेको ठुलो भिड
एजेन्सी : सर्प भन्ने वित्तिकै आङ सिरिङ्ग हुनेगर्छ। त्यसमाथि कोब्रा सर्पको त कुरै नगरौं। कोब्रा देख्ने वित्तिकै मुटुले ठाउँ नै छोड्न थाल्छ। तर, भारतको कर्नाटकस्थित चिकमंगलुरुको होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प देखेपछि गाउँलेको भीड [ पुरा पढ्नुहोस ]
नेपालमै सोह्र बर्षकी किशोरीले तिम्ल्याहा बच्चा जन्माइन
October 27, 2018 Comments Off on नेपालमै सोह्र बर्षकी किशोरीले तिम्ल्याहा बच्चा जन्माइन
पातारासी–२ तल्फीगाउँकी १६ वर्षीया किशोरी सङ्गीता बोहोराले तीन शिशु जन्माएकी छिन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा ती शिशु जन्माएकी हुन् । पहिलो एक हजार ४०० ग्राम, दोसो ८५० ग्राम र तेस्रो शिशु [ पुरा पढ्नुहोस ]
यी हुन् दुइ यौनांग भएकी संसारकै अनौठी युवती – जस्को गर्भाशय पनि दुईओटै छ (भिडियो हेर्नुहोस)
October 26, 2018 Comments Off on यी हुन् दुइ यौनांग भएकी संसारकै अनौठी युवती – जस्को गर्भाशय पनि दुईओटै छ (भिडियो हेर्नुहोस)
फ्रिजको ढोकामा किन गरिएको हुन्छ चुम्बक जडान ? यति छ कारण
October 26, 2018 Comments Off on फ्रिजको ढोकामा किन गरिएको हुन्छ चुम्बक जडान ? यति छ कारण
एजेन्सी । अहिले धेरैजसो फ्रिजको ढोकामा चुम्बक जडान गरिएको हुन्छ। जसका कारण ढोका हल्का धकेलिदिनासाथ टम्म बन्द हुन्छ। तर पहिलेका फ्रिजहरुमा यस्तो हुँदैनथ्यो। पहिलेका फ्रिजमा चुकुल लगाइन्थ्यो। पुरानो समयमा फ्रिजमा चुकुल जडान गरिने बेला बालबालिका [ पुरा पढ्नुहोस ]
मालिक्नीको कुटाईले बालकको हात भाँचियो, दाँत हल्लिए
October 26, 2018 Comments Off on मालिक्नीको कुटाईले बालकको हात भाँचियो, दाँत हल्लिए
दैलेख – होटलमा काम गर्ने बाह्र वर्षको बालकले १५ सय चोरेको आरोपमा दैलेखमा होटल मालिक्नीले बालकको हात भाँचिदिएकी छिन् । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दुल्लू नगरपालिका–३, सियालाको सागर होटलकी मालिक्नी शान्ति शाहीले बालकको हात भाँचेकी हुन् [ पुरा पढ्नुहोस ]
समाज कता जाँदैछ : एक–अर्काले श्रीमती साटेर यौनसम्पर्कको स्वाद
October 25, 2018 Comments Off on समाज कता जाँदैछ : एक–अर्काले श्रीमती साटेर यौनसम्पर्कको स्वाद
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । हाम्रो समाजले सोच्नै नसक्नेगरी यहाँका दम्पत्तिले श्रीमती साटेर यौनसम्पर्क गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । आफ्नी श्रीमतीलाई परपुरुषसँग र परपुरुषकी श्रीमती वा गर्लफेण्डसँग आफूले [ पुरा पढ्नुहोस ]
नेपालको सनसनीपूर्ण जीत, माल्दिभ्स ४–० ले पराजित!
October 25, 2018 Comments Off on नेपालको सनसनीपूर्ण जीत, माल्दिभ्स ४–० ले पराजित!
काठमाडौं। आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको यू–१५ साफ च्याम्पियनसिप अन्र्तगत माल्दिभ्स विरुद्धको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । नेपालले माल्दिभ्सलाई ४–० को गोल अन्तरले हराएको हो । सातदोवाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ४–० गोल [ पुरा पढ्नुहोस ]